Nhau - Musiyano uripo pakati pe AC fan uye DC fan
Musiyano uripo pakati pe AC fan neDC fan
1. Kushanda musimboti:
Iwo anoshanda musimboti weiyo DC kutonhora fan: kuburikidza DC voltage uye yemagetsi induction, magetsi simba inoshandurwa kuita michina yekufambisa kutenderera kweiyo chipande. Iyo coil neIC zviri kuramba zvichishandurwa, uye iyo induction yemagineti mhete inotyaira kutenderera kweiri.
Iyo inoshanda musimboti wea AC fan: Inotyairwa neA AC magetsi sosi, uye iyo voltage inozochinja pakati pezvakanaka nezvakaipa. Izvo hazvitsamire pane wedunhu kudzora kuti iite iyo magnetic field. Kuwanda kwesimba remagetsi kwakasimbiswa, uye iko kuchinja kwekumhanya kwemagineti matanda anogadzirwa nesilicon simbi simbi kunoonekwa nekuwanda kwesimba remagetsi. Iyo yakakwira iyo frequency, inokurumidza iyo magnetic shamba switching kumhanya, uye iyo inokurumidza iyo kutenderera kumhanya mune dzidziso. Nekudaro, iyo frequency haifanire kunge ichikurumidza, kukasika kunokonzera kuoma kutanga.
2. Maumbirwo echimiro:
Iyo rotor yeiyo DC inotonhorera fan inoshandisa mafeni mashizha eiyo DC kutonhora fan, ayo ari manyuko emhepo kuyerera, fan fan axis, uye anoshandiswa kutsigira kutenderera kweiyo akaenzana fan fan mashizha, iyo rotor magnetic rin'i, zvachose magineti, uye kukurudzira iyo yemagineti mwero yekuchinja yekumhanyisa kiyi, iyo yemagineti mhete furu, Yakagadziriswa magineti mhete. Uye zvakare, inosanganisira zvakare kutsigira matsime. Kubudikidza nezvikamu izvi, chikamu chose uye chikamu chemota chakasungirwa kutenderera kwetibhii. Iwo mafambiro ekutenderera anogadzirwa, uye inoshanda uye yakakura kutenderera kumhanya kwakakosha. Iyo yekumhanyisa kumisikidza mashandiro akanaka, uye iko kutonga kuri nyore.
Chimiro chemukati che AC fan (imwechete-chikamu) chinoumbwa nemaviri coil windings, imwe ndiko kutanga kutenderera, aya mairi mairi akabatana mune akateedzana nemumwe, nekudaro achiumba mapoinzi matatu, akateedzana poindi ndiyo yakajairika magumo, uye iyo yekutanga ichitenderera kumagumo ndiko kutanga kwekupedzisira mashandiro Mugumo wekutenderera ndiyo yekumhanyisa kupera. Uye zvakare, yekutanga capacitor inodiwa. Iko kugona kunowanzo kuve pakati pe12uf uye iyo yekumira voltage kazhinji 250v. Iko kune maviri ekubatanidza. Rimwe divi rakabatana nemagumo ekutanga kumhanyisa uye imwe yacho yakabatana nekumagumo kwekumhanyisa kumhanya kuita katatu. Simba rekushandisa (hapana chikonzero chekusiyanisa mutsara wekurarama uye tambo isina kwayakarerekera) yakabatana kumagumo eiyo kumhanya ichitenderera (ndiko kuti, zvakare yakabatana kune mumwe mugumo weiyo capacitor), uye imwe yacho yakabatana kune akajairwa magumo , uye waya yekumisikidza yakabatana nemota yegobvu.
3. Hunhu hwezvinhu:
Zvinyorwa zve DC kutonhora feni: Yakagadzirwa nesimbi yezvinhu, uye hupenyu hupenyu hunogona kushandiswa zvinowirirana kwemaawa anopfuura zviuru makumi mashanu. Iyo yemukati dhizaini yeDC ine transformer uye main control board (inosanganisira frequency kutendeuka wedunhu, gadziriso firita, gudzazwi redunhu, nezvimwewo), izvo zvisingazokanganisike nekuchinja kwemagetsi. Hupenyu hwakareba hwebasa.
Chimiro chemukati cheiyo fan fan chinonyanya kushandura. Zvizhinji zvezvinhu zvinoshandiswa kune fan ye AC zvinogadzirwa neyekusunungura tsono tsono, kazhinji tungsten tsono kana isina simbi zvinhu. Kana iyo voltage ichichinja zvakanyanya, zvinokanganisa hupenyu hwebasa reiyo transformer.
Hvac Fan Anodhonza, 12cm Ac Axial Fan, Metal Grill Fan 80mm Chengetedza, 172mm Ac Axial Fan, Simbi fan fan, Plastiki Fan Guard,